05.09.21 Avyakt Bapdada Nepali Murli 15.03.88 Om Shanti Madhuban
नयाँ दुनियाँको तस्बिरको आधार वर्तमान श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन
आज विश्व रचयिता, विश्वको श्रेष्ठ तकदिर बनाउने बापदादाले आफ्ना श्रेष्ठ तकदिरका तस्बिर-स्वरूप बच्चाहरूलाई देखिरहनु भएको छ। तिमी सबै ब्राह्मण आत्माहरू विश्वका श्रेष्ठ तकदिरका तस्बिर हौ। ब्राह्मण जीवनको तस्बिरबाट भविष्यको श्रेष्ठ तकदिर स्पष्ट देखिन्छ। ब्राह्मण जीवनका हरेक श्रेष्ठ कर्मले भविष्यको श्रेष्ठ फलको अनुभव गराउँछ। ब्राह्मण जीवनका श्रेष्ठ संकल्पले भविष्यको श्रेष्ठ संस्कारलाई स्पष्ट गर्छ। त्यसैले वर्तमानको ब्राह्मण जीवन तस्बिर हो– भविष्य तकदिरवान संसारको। बापदादा यस्ता भविष्यका तस्बिर बच्चाहरूलाई देखेर हर्षित भइरहनु भएको छ। तस्बिर पनि तिमीहरू हौ, भविष्यको तकदिरको आधारमूर्त पनि तिमीहरू हौ। तिमीहरू श्रेष्ठ बन्छौ तब दुनियाँ पनि श्रेष्ठ बन्छ। तिम्रो उड्तीकलाको स्थिति भयो भने विश्वको पनि उड्तीकला हुन्छ। तिमी ब्राह्मण आत्माहरू समय-समयमा जस्तो अवस्थाबाट पार हुन्छौ त्यसै अनुसार विश्वको अवस्था पनि परिवर्तन हुन्छ। तिम्रो सतोप्रधान स्थिति हुँदा विश्व पनि सतोप्रधान हुन्छ, गोल्डन एजेड हुन्छ। तिमीहरू परिवर्तन हुँदा दुनियाँ पनि परिवर्तन हुन्छ। तिमीहरू त्यति आधारमूर्त हौ।
वर्तमान समयमा बाबाको साथमा कति श्रेष्ठ पार्ट खेलिरहेका छौ! सारा कल्प भित्र सबैभन्दा महान विशेष पार्ट अहिले खेलिरहेका छौ! बाबाको साथसाथै सहयोगी बनेर विश्वका हरेक आत्माका अनेक जन्मका आशाहरू पूर्ण गरिरहेका छौ। बाबाद्वारा हरेक आत्मालाई मुक्ति वा जीवनमुक्तिको अधिकार प्राप्त गराउनको लागि निमित्त बनेका छौ। सर्वका इच्छाहरू पूर्ण गर्ने बाबा समान ‘कामधेनु’ हौ, कामनाहरू पूर्ण गर्नेवाला हौ। यसरी हरेक आत्मालाई इच्छा मात्रम् अविद्याको स्थितिको अनुभव गराउँछौ, जसबाट आधाकल्प अनेक जन्म, न भक्ति गर्ने आत्माहरूका, नत जीवनमुक्तिको अवस्थाका आत्माहरूको कुनै इच्छा रहन्छन्। एक जन्मको इच्छा पूर्ण गर्नेवाला होइन, अनेक जन्मको लागि इच्छा मात्रम् अविद्याको अनुभूति गराउनेवाला हौ। जसरी बाबाका सर्व भण्डारा, सर्व खजाना सदा भरपुर हुन्छन्, अप्राप्तिको नाम निशान हुँदैन, त्यसैगरी बाबा समान सदा र सर्व खजानाबाट भरपुर हुन्छौ।
ब्राह्मण आत्मा अर्थात् प्राप्ति स्वरूप आत्मा, सम्पन्न आत्मा। जसरी बाबा सदा लाइट हाउस, माइट हाउस हुनुहुन्छ त्यसैगरी ब्राह्मण आत्माहरू पनि बाबा समान छौ। लाइट हाउस हौ त्यसैले हरेक आत्मालाई आफ्नो गन्तव्यसम्म पुर्याउनको लागि निमित्त हुन्छौ। जसरी बाबा हर संकल्प, हर बोली, हर कर्मबाट हर समय दाता हुनुहुन्छ, वरदाता हुनुहुन्छ त्यसैगरी तिमी ब्राह्मण आत्माहरू पनि दाता हौ, मास्टर वरदाता हौ। यस्तो ब्राह्मण जीवनका तस्बिर हौ? कुनै पनि तस्बिर बनाउँछौ भने त्यसमा सबै विशेषताहरू देखाउँछौ नि। त्यसैगरी वर्तमान समय ब्राह्मण जीवनको तस्बिरका विशेषताहरू आफूमा भरिसकेका छौ? सबैभन्दा ठूलो चित्रकार तिमी हौ, जसले आफ्नो चित्र बनाइरहेका छौ। तिम्रो चित्र बन्नासाथ विश्वको चित्र पनि बन्छ। यस्तो अनुभव गर्छौ नि?
कतिले सोध्छन् नि– नयाँ दुनियाँमा के हुन्छ? नयाँ दुनियाँको तस्बिर नै तिमी हौ। तिम्रो जीवनबाट भविष्य स्पष्ट हुन्छ। यस समयमा पनि आफ्नो तस्बिरलाई हेर– सदा त्यस्तो तस्बिर बनेका छौ, जसलाई जसले देखे पनि सदाको लागि प्रसन्नचित्त बनोस्। कोही अलिकति पनि अशान्तिको लहर भएको होस् तर तिम्रो तस्बिर देखेर अशान्तिलाई नै भुलोस्, शान्तिको लहरमा लहराउन थालोस्। अप्राप्ति स्वरूपले प्राप्तिको अनुभूति स्वत: नै गरोस्। भिखारी बनेर आउने पनि भरपुर बनेर जाओस्। तिम्रो मुस्कुराइरहेको मूर्तिलाई देखेर मनको अथवा आँखाको रुवाइ भुलोस्, मुस्कुराउन सिकेर जाओस्। तिमीहरूले पनि बाबालाई भन्छौ नि– मुस्कुराउन सिकाउनु भयो.... त्यसैले तिम्रो काम नै हो रुनबाट छुटाउने र मुस्कुराउन सिकाउने। त्यसैले ब्राह्मण जीवनको तस्बिर यस्तो हुन्छ। सदा यो स्मृतिमा राख– हामी यस्ता आधारमूर्त हौं, फाउण्डेशन हौं। वृक्षको चित्रमा देखेका छौ– ब्राह्मणहरू कहाँ बसेका छन्? जरामा बसेका छौ नि। ब्राह्मण फाउण्डेशन बलियो हुन्छ त्यसैले त आधा कल्प अचल-अडोल रहन्छौ। साधारण आत्मा होइनौ, आधारमूर्त हौ, फाउण्डेशन हौ।
यो समयको तिम्रो सम्पूर्ण स्थिति सत्ययुगको १६ कला सम्पूर्ण स्थितिको आधार हो। अहिलेको एकमत त्यहाँको एक राज्यको आधारमूर्त हुन्छ। यहाँको सर्व खजानाको सम्पन्नता– ज्ञान, गुण, शक्तिहरू, सर्व खजानाहरू त्यहाँको सम्पन्नताका आधार हुन्। यहाँको देहको आकर्षणबाट न्यारापन, त्यहाँको तन्दुरुस्तीको प्राप्तिको आधार हुन्छ। अशरीरीपनको स्थिति निरोगीपनको र दीर्घायुको आधार स्वरूप हुन्छ। यहाँको बेफिक्र बादशाहपनको जीवन नै त्यहाँको हर घडीको मनको मोजको जीवन बनाउने स्थितिको प्राप्तिको आधार बन्छ। एक बाबा दोस्रो न कोही– यहाँको यो अखण्ड-अटल साधना त्यहाँको अखण्ड, अटल, अखुट, निर्विघ्न साधनहरूको प्राप्तिको आधार बन्छ। यहाँको सानो संसार बापदादा अथवा माता-पिता र भाइ-बहिनीहरूको, त्यहाँको सानो संसारको आधार बन्छ। यहाँको एक माता-पिताको सम्बन्धको संस्कारले त्यहाँ पनि एउटै विश्वका विश्व-महाराजन अथवा विश्व-महारानीलाई माता-पिताको रूपमा अनुभव गर्छन्। यहाँको स्नेहयुक्त परिवारको सम्बन्धले त्यहाँ पनि चाहे राजा वा प्रजा बनुन् तर प्रजाले पनि आफूलाई परिवार सम्झन्छन्, परिवारमा स्नेहको समीपता हुन्छ। पद रहे पनि स्नेहको पद हुन्छ, संकोच र भयको हुँदैन। त्यसैले तिमी भविष्यका तस्बिर हौ। यी सबै कुरा आफ्नो तस्बिरमा चेक गर– कहाँसम्म श्रेष्ठ तस्बिर बनेर तयार भएको छु? कि अहिलेसम्म रेखा मात्रै खिचिरहेका छौ? होसियार आर्टिस्ट हौ नि।
बापदादाले यही हेरिरहनु हुन्छ– हरेकले कहाँसम्म आफ्नो तस्बिर तयार गरेका छन्? अरूलाई त दोष दिन सक्दैनौ– यसले यो ठीक गरेन त्यसैले यस्तो भयो। आफ्नो तस्बिर आफैं बनाउने हो। सबै चीजहरू अर्थात् खजानाहरू त सबै बापदादाबाट मिलिरहेको छ, त्यसमा त कमी भएको छैन नि। बनाउनेवाला माथि भर पर्छ, जति चाहन्छौ त्यति लिन सक्छौ। लिनेवालाले केवल लिन सके हुन्छ। बाँकी खुल्ला बजार छ, बापदादाले यो हिसाब राख्नुहुन्न– दुई लिनु छ वा चार लिनु छ। हरेकले राम्रो भन्दा राम्रो तस्बिर बनाएका छौ। सदा आफूलाई यो सम्झ– म नै भविष्यको तकदिरको तस्बिर हुँ। यस्तो सम्झिएर हर कदम उठाऊ। स्नेही भएको कारणले सहयोगी पनि छौ र सहयोगी भएको कारणले बाबाको सहयोग हरेक आत्मालाई मिल्छ। यस्तो होइन– कुनै आत्मालाई धेरै सहयोग र कसैलाई कम, होइन। बाबाको सहयोग हरेक आत्मा प्रति एकको रिटर्नमा पदमगुणा मिल्छ नै। जति पनि सहयोगी आत्माहरू छन्, सबैलाई बाबाको सहयोग सदा नै मिल्छ र बाबा भएसम्म त्यो सहयोग हुन्छ नै। जब बाबाको सहयोग छ भने हरेक कार्य भई नै सकेको छ। यस्तो अनुभव गर्छौ पनि र गर्दै पनि जानु छ। कुनै मुस्किल छैन किनकि भाग्यविधाताद्वारा भाग्य प्राप्तिको आधार बनेको छ। जहाँ भाग्य हुन्छ, वरदान हुन्छ त्यहाँ मुस्किल हुँदै हुँदैन।
जसको धेरै राम्रो तस्बिर बन्छ, अवश्य उसकै पहिलो नम्बर आउँछ। त्यसैले सबै फस्ट डिभिजनमा त आउनेवाला हौ नि? फस्ट नम्बरमा एकजना मात्र आउँछ तर फस्ट डिभिजन त छ नि। अब केमा आउने हो? फस्ट डिभिजन सबैको लागि हो। केही गर्नु राम्रो हुन्छ। बापदादाले त सबैलाई मौका दिइरहनु भएको छ– चाहे भारतवासी होऊन् वा डबल विदेशी होऊन् किनकि अहिले रिजल्ट आउट त भएको छैन। कहिलेकाहीँ राम्रा-राम्राहरू पनि रिजल्ट आउट हुनु भन्दा पहिला नै आउट हुन्छन् त्यसैले त्यो ठाउँ मिल्छ नि त्यसैले जे लिन चाहे पनि अहिले मौका छ। फेरि बोर्ड लाग्नेछ– अब ठाउँ छैन। यी सबै सिट फुल हुनेछन् त्यसैले खुब उड। दौडिने मात्र होइन, उड। दौडिनेहरू त तलै रहन्छन्, उड्नेहरू उड्छन् त्यसैले उड्दै जाऊ र उडाउँदै जाऊ। अच्छा!
चारैतिरका सर्वश्रेष्ठ तकदिरका श्रेष्ठ तस्बिर स्वरूप महान आत्माहरूलाई, सदा स्वयंलाई विश्वको आधारमूर्त अनुभव गर्ने आत्माहरूलाई, सदा आफ्नो प्राप्ति स्वरूपको अनुभूतिद्वारा अरूलाई पनि प्राप्ति स्वरूप अनुभव गराउने श्रेष्ठ आत्माहरूलाई, सदा बाबाको स्नेह र सहयोगको पद्मगुणा अधिकार प्राप्त गर्ने पूज्य ब्राह्मण सो देव आत्माहरूलाई बापदादाको याद-प्यार एवं गुडमर्निङ्ग। रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाबालाई गुडमर्निङ्ग, नमस्ते।
बाबाको हात सदा मस्तकमा छ नै– यस्तो अनुभव गर्छौ? श्रेष्ठ मत नै श्रेष्ठ हात हो। त्यसैले जहाँ हर कदममा बाबाको हात अर्थात् श्रेष्ठ मत छ, त्यहाँ श्रेष्ठ मतले श्रेष्ठ कार्य स्वत: नै हुन्छ। सदा हातको स्मृतिले समर्थ बनेर अगाडि बढ्दै जाऊ। बाबाको हातले सदा अगाडि बढेको अनुभव सजिलै गराउँछ त्यसैले यो श्रेष्ठ भाग्यलाई हरेक कार्यमा, स्मृतिमा राखेर अगाडि बढ्दै जाऊ। सदा हात छ, सदा जित छ।
प्रश्न:– सहजयोगी सदा रहने सहज विधि कुनचाहिँ हो?
उत्तर:– बाबा नै संसार हो– यो स्मृतिमा रह्यौ भने सहजयोगी बन्छौ किनकि सारा दिन संसारमा नै बुद्धि जान्छ। जब बाबा नै संसार भएपछि बुद्धि कहाँ जान्छ? संसारमा नै जान्छ नि, जंगलमा त जाँदैन। त्यसैले बाबा नै संसार भएपछि स्वत: सहजयोगी बन्छौ। नत्र मेहनत गर्नु पर्ने हुन्छ– यहाँबाट बुद्धि हटाउन, त्यहाँ बुद्धि जुटाउन। सदा बाबाको स्नेहमा समाहित भइरह्यौ भने उहाँले भुल्न सक्नुहुन्न। अच्छा।
अव्यक्त बापदादासँग डबल विदेशी भाइ-बहिनीहरूको भेटघाट:–
डबल विदेशीहरूमा सेवाको उमंग राम्रो छ, त्यसैले वृद्धि पनि राम्रो गरिरहेका छौ। विदेश सेवामा १४ वर्षमा वृद्धि राम्रो गरेका छौ। लौकिक र अलौकिक– डबल कार्य गर्दै अगाडि बढिरहेका छौ। डबल कार्यमा समय पनि लगाइरहेका छौ र बुद्धिको, शरीरको शक्ति पनि लगाइरहेका छौ। यो पनि बुद्धिको कमाल हो। लौकिक कार्य गर्दै सेवामा अगाडि बढ्नु, यो पनि हिम्मतको काम हो। यस्ता हिम्मत भएका बच्चाहरूलाई बापदादा सदा हरेक कार्यमा मदतगार हुनुहुन्छ। जति हिम्मत त्यति पदमगुणा बाबा मदतगार हुनुहुन्छ नै। दुवै पार्ट खेलेर उन्नति प्राप्त गरिरहेका छौ– यो देखेर बापदादा सदा बच्चाहरूमाथि हर्षित हुनुहुन्छ। मायाबाट त मुक्त छौ नि? योगयुक्त रहेमा स्वत: नै मायाबाट मुक्त पनि हुन्छौ। योगयुक्त भएनौ भने मायाबाट पनि मुक्त हुँदैनौ। मायालाई पनि ब्राह्मण आत्माहरू प्यारो लाग्छ। जो पहलवान छ, उसलाई पहलमानसँग नै मज्जा आउँछ। माया पनि शक्तिशाली छ। तिमीहरू पनि सर्वशक्तिमान् छौ, त्यसैले मायालाई सर्वशक्तिवानसँग खेल खेल्न राम्रो लाग्छ। अब त चिनिसक्यौ नि मायालाई राम्रोसँग? कि कहिलेकाहीँ नयाँ रूपमा आउँछ। नलेजफुलको अर्थ नै हो बाबालाई पनि जान्नु, रचनालाई पनि जान्नु र मायालाई पनि जान्नु। यदि रचयिता र रचनालाई जान्यौ र मायालाई जानेनौ भने नलेजफुल भएनौ।
कहल्यै पनि कुनै पनि कुरामा चाहे तन कमजोर होस् वा कार्यको धेरै बोझ होस् तर मनले कहिल्यै पनि थाक्नु हुँदैन। तनको थकावट मनको खुशीले समाप्त हुन्छ। तर मनको थकावटले भने शरीरको थकावटलाई पनि बढाइदिन्छ। मन कहिल्यै थाक्नु हुँदैन। जब थाक्छौ, सेकेण्डमा बाबाको वतनमा आउनु। यदि मनलाई थाक्ने बानी परेको छ भने ब्राह्मण जीवनको उमंग-उत्साहको जुन अनुभव हुनु पर्ने हो, त्यो हुँदैन। चलि त रहन्छौ तर चलाउनेले चलाइरहनु भएको छ– यो अनुभव हुँदैन। मेहनतले चलिरहन्छौ भने जहाँ मेहनत अनुभव हुन्छ त्यहाँ थकावट पनि हुन्छ। त्यसैले सधैं यही सम्झ– ‘करावनहारले गराइरहनु भएको छ, चलाउनेले चलाइरहनु भएको छ’।
समय र शक्ति प्रमाण सेवा गर्दै जाऊ। सेवाले कहिल्यै पर्खिदैन, आज नभए पनि भोलि त हुनु नै छ। यदि सच्चा दिलले, दिलको स्नेहले जति सेवा गर्न सक्छौ त्यति गर्छौ भने बापदादाले कहिल्यै भन्नुहुन्न– यति काम गर्यौ यति गरेनौ। स्याबासी मिल्छ। समय प्रमाण, शक्ति प्रमाण सच्चा दिलले सेवा गर्छौ भने सच्चा दिलमाथि साहेब राजी हुनुहुन्छ। यदि तिम्रो कार्य रहन गयो भने पनि बाबाले कतै न कतैबाट पूरा गराउनुहुन्छ। जुन सेवा जुन समयमा हुनु पर्ने हो त्यो भएर नै छोड्छ, रहन सक्दैन। कुनै न कुनै आत्मालाई टच गराएर बापदादाले आफ्ना बच्चाहरूको सहयोगी बनाउनुहुन्छ। योगी बच्चाहरूलाई सबै प्रकारको सहयोग समयमा मिल्छ नै। तर कसलाई मिल्छ? सच्चा दिल भएका सच्चा सेवाधारीलाई। त्यसैले सबै सच्चा सेवाधारी बच्चा हौ? साहेब राजी हुनुहुन्छ म माथि– यस्तो अनुभव गर्छौ नि? अच्छा!
एक बाबाको लभमा लभलीन रहेर सदा चढ्तीकलाको अनुभव गर्ने सफलतामूर्त भव
सेवामा वा स्वयंको चढ्तीकलामा सफलताको मुख्य आधार हो– एक बाबामा अटुट प्यार। बाबा सिवाय अरू केही नदेखियोस्। संकल्पमा पनि बाबा, बोलीमा पनि बाबा, कर्ममा पनि बाबाको साथ रहोस्। यस्ता लभलीन आत्माले एक शब्द बोल्दा पनि त्यो स्नेहको बोलीले अर्को आत्मालाई पनि स्नेहमा बाँधिदिन्छ। यस्ता लभलीन आत्माको एक बाबा शब्दले नै जादुको काम गर्छ। रूहानी जादुगर बन्छौ।
योगी आत्मा त्यो हो, जो अन्तर्मुखी बनेर लाइट र माइट रूपमा स्थित रहन्छ।